Tilmaamaha Safarka ee Delhi Halal - eHalal Travel Mart
Tilmaamaha Safarka ee Delhi Xalaal
Delhi waa caasimada India waana xarunta dowlada. Waxay sameysataa Magaalo-madaxeedka Qaranka ee Delhi, halkii ay ka ahaan lahayd dowlad. Delhi waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn Hindiya, waana xudunta mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn adduunka, iyadoo ay ku nool yihiin in ka badan 21 milyan. Hindiya gudaheeda waa xarun weyn oo farshaxan, ganacsi, waxbarasho, dalxiis, iyo isu-gudub. Maaddaama ay tahay caasimado dhowr boqortooyo 2000kii sano ee la soo dhaafay, Delhi sidoo kale waxay ka kooban tahay xarumo fara badan oo ah goobo taariikhi ah oo si fiican loo ilaaliyay oo loogu talagalay dalxiiska booqashada.
Socotada khibrad yar u leh booqashada megacities-ka soo koraya waxay u arki doonaan Delhi inay noqoto mid qasan, camiran oo sannadka intiisa badan, nijaasaysan. Xilliga guga dabayaaqadiisa iyo bilaha xagaaga horaantiisa, magaaladu waa kulayl kulul. Si qoto dheer u sii qod yar si kastaba ha noqotee waxaad heli doontaa aragti yar oo amar ah oo ka hooseeya fowdada iyo sidoo kale hodanka dhaqanka iyo casriga ah ee Hindiya ee barwaaqada ah ee is barbar socda. Soo-booqdayaasha markii ugu horreysay ee dareemaya naxdinta dhaqameed waxaa lagula talinayaa inaysan ku darin booqashada inta lagu jiro xaaladaha cimilada xun, oo ay helaan qol hudheel hufan leh si aad ugu noolaato raaxada inta u dhexeysa safaradaada booqashada.
Iyadoo ay la socoto caddeyn degenaansho isdaba joog ah oo ka bilaabmaysa qarnigii 6aad ee dhalashadii Ciise ka hor, Delhi waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu da'da weyn adduunka. Waxaa loo maleynayaa in la dhisay oo la burburiyey kow iyo toban jeer, caddaynta ugu yaraan siddeed degsiimooyin kala duwan ayaa weli lagu arki karaa Delhi. Meelaha taariikhiga ah ee sida fiican loo ilaaliyay waa xilliyadii ay xukumeen muslimiin iyo ingiriis, intii udhaxaysay 1193 iyo 1947.
Magaalada halyeeyga ah ee Indraprastha oo ka soo jeeda qulqulatada Mahabharata ayaa la sheegay inay ku taalay halka ay hadda Delhi jiifto, laakiin wax ka haray lama helin.
Laga soo bilaabo qarnigii 10aad ilaa 14aad, magaalada waxay xudun u ahayd waxa hadda loo yaqaan South Delhi:
Surajkund - Waxaa lagu dhisay qarnigii 9aad ilaa 10aad meesha hadda ah koonfurta fog ee magaalada Delhi. Kayd biyood weyn ayaa la arki karaa, sifiican loo xafiday.
Qila Rai Pithora (ama Rai Pithora) - Waxa laga aasaasay malaha qarnigii 11aad magaalo la yiraahdo "Lalkot" oo hoos timaada xukunka Hindu, aagga Mehrauli ee hadda jira. Qiyaastii 1180, taliyihii Hindu-ga Prithviraj Chauhan ayaa balaariyay magaaladan wuxuuna u bixiyay Qila Rai Pithora. Qaar ka mid ah burburka qalcadaha dhufaysyada xilligan ayaa wali ka muuqda agagaarka Qutab Minar iyo Mehrauli.
Mehrauli - Muddo yar ka dib, sanadkii 1192, hoggaamiyihii muslimiinta Muxammad Ghori ayaa dagaalkii kaga adkaaday Prithviraj Chauhan. Ghori wuxuu ka tegey addoonkiisii ​​Qutub-ud-din Aibak inuu noqdo kuxigeenkiisa, kaasoo isaguna qabsaday Delhi sanadkii xigay. Ka dib dhimashadii Ghori ee 1206, Qutub-ud-din wuxuu ku dhawaaqay naftiisa inuu xukumo Delhi wuxuuna aasaasay wixii loo yiqiin Boqortooyadii Slave ee Delhi Sultanate. Qutub-ud-din ayaa si weyn uga qayb qaatay xagga dhismaha iyadoo la dhisay Mehrauli. Waxqabadkiisa ugu caansan waa bilowga Qutub Minar (oo ugu dambeyn la soo gabagabeeyay 1220). Qabuuraha iyo dhismayaasha kale ee ku dhow Qutub Minar sidoo kale waxay ku yaalliin xilligan.
Siri - Boqortooyadii Addoomada waxaa soo raacay boqortooyadii Khilji (ama Khalji). Sannadkii 1303-kii waxay aasaaseen Siri, markii ugu horreysayna xero milateri si ay uga difaacaan duulaankii Mongol ee suurtagalka ahaa, markii dambena waxay noqotay magaalo deyr leh. Maalmahan Hauz Khas complex (waqooyiga Mehrauli) waxaa ku jira burburka Siri Fort, madrassa, iyo dhismayaal kale oo soo jiray.
Tughlakabad - Khiljis ka dib qalalaase ayaa jiray ilaa Ghiyasuddin Tughlaq (gudoomiye Turk) ku soo duulay Delhi 1320-yadii, wuxuu bilaabay boqortooyadii Tughlaq, wuxuuna aasaasay caasimad cusub Tughlakabad, oo ku taal South East Delhi. Wiilkiisa Muxamed Bin Tughlaq wuxuu abuuray magaalo kale oo la yiraahdo Jahapanah oo ku taal aagga u dhexeeya Siri iyo Qila Rai Pithora, iyaga oo mideeyay hal magaalo. Tughlakabad waa sii waday, si kastaba ha noqotee, inay noqoto magaalada ugu weyn ee caasimadda.
Purana Qila - burburkii Shergarh
Laga bilaabo qarnigii 14aad, aagag cusub ayaa laga dhisay woqooyi, oo u dhow bartamaha magaalada hadda:
Firozabad (ama Kotla Firoze Shah) - oo uu dhisay wiilka Muhammad Bin Tughlaq, Firoze, sanadkii 1354. Weli waxaa jira burbursan qaar ka mid ah oo ka muuqda hareeraha garoonka cricket-ka Feroz Shah ee ku yaal Central Delhi, webiga agtiisa. Magaaladu waxay ahayd meel aad u ballaadhan, waxayna ka kooban tahay qasriyo badan, masaajidyo, hoolalka la faquuqo, iyo keyd biyood badan oo biyo leh. Firoze ayaa sidoo kale qasriga dushiisa ka dhistay 1500 jir Ashokan Pillar ah (oo hore looga taagay Meerut Samrat Ashok). Firoze waxaa lagu aasay gudaha xabaal sare oo ku taal Hauz Khas. Dhimashadiisii ​​ka dib, saldanadnimadii waxay noqotay mid aan degganayn oo daciif ah, Delhi waxaa la wareegay oo shaqada ka ceyriyay Tamerlane. Sayid iyo Lodhi boqortooyooyinkii xukumayay Delhi ka dib Tughlaqs ayaa wax yar dhistay, dhismaha kaliya ee ku habboon ee laga arki karo xilligan waa qabuuraha ku yaal Lodhi Gardens. Ugu dambeyntii Lodhis waxaa jabiyay Babur, oo markaa bilaabay inuu dhiso Boqortooyada Mughal 1526.
Albaabka Delhi ee Fort Red
Shergarh - Sannadkii 1533, wiilkii Babur ee Humayun wuxuu dhisay magaalada cusub ee Dinpanah, oo u dhow webiga koonfurta Firozabad. 1540 Humayun waxaa ka adkaaday Sher Shah Suri waxaana lagu qasbay inuu ka baxo Delhi. Sher Shah Suri wuxuu magaalada cusub ee Shergarh ka aasaasay burburkii Dinpanah. Shergarh waa waxaad ku aragtaa Purana Qila maanta, oo u dhaw beerta xayawaanka ee Delhi. Humayun mar dambe ayuu dib u helay Delhi oo uu ku soo noqday xukunka. Kadib wuxuu dhameystiray dhismaha wuxuuna bilaabay inuu xukumo Shergarh.
Shahjahanabad - boqorada soo socda ayaa ka guuray Delhi waxayna ka dhigeen Agra caasimadooda. Shahjahan (Humayun awoowgiis) wuxuu ku noqday Delhi wuxuuna aasaasay Shahjahanabad (casri ah Old Delhi), oo ay ku jiraan Masjidka Jaamac iyo Qalcadda Cas. Inta badan derbiga magaalada, iyo seddex ka mid ah lixda albaabkiisa, ayaa wali jira maanta.
Lutyen's New Delhi - New Delhi waxaa la aasaasay 1911 kadib markii Ingiriisku go’aansaday inuu ka raro caasimada India caasimada Kolkata. Waa magaalo qorshaysan, oo uu naqshadeeyay naqshadeeye Sir Edwin Lutyens.
Dhammaantood kama dhasheen dhisayaasha Delhi taallo xusuus badan oo Muslim ah oo ku nool Delhi. Qaar badan oo ka mid ah waxay u haajireen Baakistaan ​​intii lagu jiray kala qaybsanaanta, iyada oo bulshada ku nool Old Delhi ay ilaalinayaan dhaqammadii hore ee maxkamadaha oo ka sii yaraa sidii ay ahaan jirtay. Magaaladu waxay hodan ku tahay taallo, oo ay ku jiraan 174 taallo ilaalin ASI ah.
Tirada dadka reer Delhi waa noocyo kaladuwan oo dad ah oo asal ahaan ka tirsan qaybaha kala duwan ee Waqooyiga Hindiya iyo meelo ka baxsan. Bulshooyinka Waqooyiga Hindiya caanka ka ah waxaa ka mid ah Punjabis. Delhi sidoo kale waxay leedahay Bulshada Koonfurta Hindiya caan ah, ugu horreynna xaafadaha sida Karol Bagh, RK Puram, Mayur Vihar iyo Munirka. Dejinta Bengali, Beerta Chittaranjan ee koonfurta Delhi, waa Mini Calcutta ee Delhi. Waxbarashada tayada leh ayaa sidoo kale ardayda ka soo qaadda gobollo kala duwan, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah ardayda ugu badan ee dalka ku nool.
Sida meelaha kale ee Gangetic Plains, Delhi wuxuu u siman yahay sida canjeelada. Astaamaha juquraafiyeed ee kaliya ee muhiimad kasta leh waa webiga Yamuna, oo hoos u socda dhinaca bari ee magaalada, iyo buuraha Aravalli oo sameeya qaanso ballaadhan laakiin hooseeya oo ka gudba galbeedka. Daanta galbeed waxaa ku yaal Old (Central) Delhi oo ciriiri ah oo ciriiri badan, koonfur-galbeedna, jidadka ballaaran, geedaha leh ee New Delhi, oo ay dhistay Ingiriisku si ay u xukumaan boqortooyadooda. Inta soo hartay waa faafitaan hoose oo aan dhammaad lahayn oo ka mid ah xaafadaha iyo xaafadaha isku raranta ah, iyadoo koonfurta Delhi guud ahaan ay ka taajirsan tahay.
Midabada degmooyinku waxay matalaan midabka khadadka metrooga weyn ee dhex mara:
Caasimaddii Ingiriisku dhisay ee Hindiya. Waxaa lagu gartaa boulevards ballaaran, wareega wareega (wareegyada taraafikada), guryaha waaweyn ee gumeysiga, iyo dhismayaasha dowladda oo ay ku xardhan yihiin taallo ka timid qaybaha kala duwan ee taariikhda Hindiya. Connaught Place (oo hada loo yaqaan Rajiv Chowk) iyo Khan Market waa xarumo ganacsi oo caan ah, agagaarka Paharganj wuxuu leeyahay hudheelo badan oo raqiis ah. Saldhigyada tareenka ee New Delhi iyo Nizamuddin iyo saldhigyo dhowr ah oo metro ah ayaa halkan ku yaal.
Waxay ka kooban tahay xudunta taariikhiga ah ee Delhi, sidoo kale loo yaqaan Old Delhi, oo leh goobo dalxiis oo waa weyn sida Fort Fort iyo Jama Masjid. Saldhigga tareenka ee Isgoyska Delhi waa halkan. Khadadka metrooga cas wuxuu socdaa bari-galbeed halkan, khadka khadkuna wuxuu maraa woqooyi-koonfur.
Waxay ka kooban tahay dhowr xaafadood oo caan ah, hudheelo badan iyo guryo marti ah, suuqyo laga dukaameysto iyo suuqyo, iyo maqaayado. Soojiidashada waaweyn waxaa ka mid ah Qutub Minar. Aagga waxaa ka shaqeeya khadka metro ee jaallaha ah.
Koonfur Bari Delhi
Guud ahaan degmo dakhli badan leh oo lamid ah South Delhi. Intaa waxaa dheer, xuduudaha degmada ee hadda jira ee South East Delhi waxaa ku jira dhowr goobood oo muhiim ah oo u dhow bartamaha magaalada, sida Humayun's Tomb, Purana Qila, iyo qeybta koonfur-bari ee magaalada qorshaysan ee New Delhi. Aagga waxaa ka shaqeeya khadka metro ee guduudka ah.
Afarta degmo ee galbeedka - Waqooyiga, Waqooyi-Galbeed, Galbeed, Koonfur-Galbeed. Xiisaha yar ee dalxiiska.
Saddexda degmo - Bariga, Waqooyiga Bari, iyo Shahdara - bariga wabiga Yamuna. Soojiidashada ugu caansan waa Macbadka Akshardham.
Cimilada Delhi waxay soo martay shan xilli oo kala duwan. Xilliga Jiilaalka, laga bilaabo bartamaha Diseembar illaa dhammaadka Janaayo, waa qabow (heerkulku wuxuu u dhawaadaa inuu u dhowaado qabow habeenkii inkastoo maalmuhu diirran yihiin) waxayna caan ku tahay ceeryaanta qaro weyn ee magaalada dul hoorta taasoo keenta duulimaadyo la joojiyo iyo tareenno dib u dhaca. Guga xilliga Delhi, bilaha Febraayo iyo Maarso waxay ku faraxsan yihiin maalmo diiran iyo fiidkii qabow. Xilliga kuleylka, Abriil illaa Juun, si aan fiicneyn ayey u kulushahay heer kulka cirka isku sii shareeraya (oo u kacaya illaa 45 ° C / 110 ° F) Heer-kulku waa dhexdhexaad illaa xilliga monsoon (roobka) (Julaay ilaa Sebtember) laakiin waa qoyaan. Oktoobar waxay keentaa deyr iyo maalmo diiran oo leh habeeno qabow.
Hoteelka Degenaanshaha Madaarka New Delhi
Hoteelka Ashu Palace
Hoteelka BB Palace Hotel New Delhi
Hoteelka Galbeedka De Aqua ee ugu Fiican New Delhi
Hoteelka Galbeedka Taurus ee ugu Fiican & Shirarka New Delhi
Hotel Blue Safir New Delhi
Hotelka Broadway New Delhi
Guryaha Cambay Boutique Gurgaon
Hoteelka Chanchal Deluxe New Delhi
Hoteelka City Park New Delhi
Huteelka Clarion Hotel New Delhi
Clark Greens Airport Hotel & Spa Dalxiis New Delhi
Hotelka Caalamiga ah ee Clark New Delhi
Clarks Inn Nehru Meel New Delhi
Diblomaasi Caalami ah Hotelka New Delhi
Hoteelka Cosmo New Delhi
Country Inn & Suites Waxaa qoray Carlson Gurgaon Qeybta 12
Country Inn & Suites Waxaa qoray Carlson New Delhi Satbari
Dalka Inn By Carlson Delhi - Saket
Barxadda by Marriott Gurgaon
Hotel Crowne Plaza New Delhi - Rohini
Delhi Hotel Parkland Difaaca Gumaysiga
Hoteelka Delhi Pride
DoubleTree waxaa qoray Hilton Hotel New Delhi Mayur Vihar
Hoteelka Dream Inn New Delhi
Eros - Waxaa Maamulaya Hilton New Delhi Nehru Place
Hoteelka Fortune Park Boulevard New Delhi
Hoteelka Fortune Park DJ Avenue Hotel New Delhi
Qolalka Fraser Qolalka New Delhi
Huteelka Dahabka ah ee Tulip Chattarpur New Delhi
Huteelka Harjas Palace New Delhi
Hilton New Delhi, hudheelka Janakpuri
Hoteelka Madaarka Magaalada New Delhi
Hoteelka Alpine Tree New Delhi
Hoteelka Amby Inn New Delhi
Hoteelka Amrit Villa New Delhi
Huteel Anmol Deluxe New Delhi
Hoteelka Aura New Delhi
Hotel Birchwood Isgoysyada New Delhi
Hoteelka Bless Inn New Delhi
Hotel Chanchal Qaaradaha New Delhi
Hoteelka Clark Surya
Hoteel Delhi 37
Hoteelka Magaalada Delhi
Hoteelka Delhi Heights
Hoteelka Emperor Timirta New Delhi
Hoteelka Era New Delhi
Hoteelka Florence Inn Karol Bagh
Hoteelka Kaymaha Cagaaran New Delhi
Hoteelka Godwin Deluxe New Delhi
Hoteelka Dahabka Deluxe ee New Delhi
Hoteelka Grand Park Inn New Delhi
Hoteelka Grand Peepal New Delhi
Hoteelka Hanuwant Palace New Delhi
Huteelka Hoteelka New Delhi
Hotel International Inn ee New Delhi
Hoteelka Iris Park New Delhi
Huteel Jyoti Mahal New Delhi
Hoteelka Kingston Park New Delhi
Hoteelka Krishna New Delhi
Hoteelka Le Roi New Delhi
Hoteelka Liv Inn Naraina Vihar
Hoteelka Liv Inn West Patel Nagar
Hoteelka Lohias New Delhi
Hoteelka Malik Continental New Delhi
Huteelka Marble Arch New Delhi
Hoteelka Metro Tower New Delhi
Hoteelka O Delhi
Hoteelka Parkland Chirag Oo Ku Taala New Delhi
Hoteelka Parkland Green Park New Delhi
Hoteelka Parkland Kailash Colony New Delhi
Hoteelka Parkland Safdarjung oo ku Taala New Delhi
Hoteelka Parkway Deluxe New Delhi
Hoteelka Pearl Plaza New Delhi
Hoteelka Raunak Plaza New Delhi
Hotel Regent Qaaradaha New Delhi
Hotel Holidays Royal New Delhi
Hoteelka Royal Star New Delhi
Hoteelka Shanti Palace New Delhi
Hoteelka Shanti Palace Patel Nagar
Hoteelka Shimla Heritage New Delhi
Saxeexa Huteelka Grand New Delhi
Hoteelka Singh Empire Dx New Delhi
Hoteelka Koonfurta New Delhi
Hoteelka Sri Nanak Qaaradaha New Delhi
Hoteelka Star New Delhi
Hoteelka Swati Deluxe New Delhi
Hoteelka Tara Palace New Delhi
Hoteelka Te New Delhi
Hoteelka The Class New Delhi Airport
Hoteelka Royal Plaza New Delhi
Hotel Maanta International New Delhi
Hoteelka Volga International New Delhi
Huteelka Walnut Castle New Delhi
Hirarka Hotel New Delhi
Huteel White Pearl New Delhi
Hoteelka Ibis Delhi Airport (Wuxuu furmayaa Janaayo 2013)
Hoteel Cajiib Ah oo Cusub New Delhi Hotel
Huteelka Indira International New Delhi
juSTa - Degaanka Panchsheel Park New Delhi
Justa Degenaanshaha Hoteelka Weyn ee Kailash Hotel New Delhi
Hotelka Kwality New Delhi
Hotelka La Sapphire New Delhi
Hoteelka Maidens New Delhi
Hoteelka Mantra Amaltas New Delhi
Huteelka Dhaqanka ee Maurya New Delhi
Hotelka Magaalada ee Magaalada New Delhi
Hoteelka Naman Palace New Delhi
Deganaanshaha Oodles Nehru Place New Delhi Hotel
Huteelka Orchid Garden New Delhi
Hotelka Caalamiga ah ee Pablas New Delhi
Hotel Park Plaza New Delhi - Hari Nagar
Hotelka Bawlos ee Hotel New Delhi
Radisson Blu Hotel Weyn Noida
Radisson Blu Marina Hotel Connaught Goob
Regenta Hotel & Xarunta Shirarka Delhi
Hotelka Rockwell Plaza New Delhi
Hotelka Degenaanshaha Royal New Delhi
Hotelka Shangri-La Eros New Delhi
Hoteelka Shervani New Delhi
Degenaanshaha Sunstar Hotel New Delhi
Hotel Svelte & Qolalka Shaqsiyadeed ee Delhi
Hoteelka Swati ee New Delhi
Tavern Hotelka Ganacsi ee New Delhi
Hoteelka Claremont & Xarunta Shirarka ee New Delhi
Huteelka Claridges ee New Delhi
Hoteelka Conhiught New Delhi
Hotelka Corus ee New Delhi
Guryaha Guryaha & Quraacda New Delhi
Hotelka Grand Shoba ee New Delhi
Hoteelka Green Villa Airport & Spa Resort New Delhi
Hans Hoteelka New Delhi
Hotelka Lalit ee New Delhi
Hoteelka Le Grand Pahar Ganj
Hoteelka Manor New Delhi
Hoteelka Metropolitan & Spa New Delhi
Hoteelka Mughal ee New Delhi
Hoteelka Oberoi ee New Delhi
Hoteelka Park ee New Delhi
Hoteelka Parkland Retreat ee New Delhi
Hotelka Sunder ee New Delhi
Tulip Inn ee New Delhi
Hoteelka White Klove ee New Delhi
Dalxiis Tivoli Garden Resort New Delhi
Hotelka Vikram New Delhi
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal ee Hindiya > Tilmaamaha Safarka ee Delhi Xalaal
Kyrgyzstan Xalaal Safar